Ukuvula i-BlackBerry Anti-Theft & Protect (ukuvikelwa kokulwa nobugebengu) kweBlackBerry 10 — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Ukuvula i-BlackBerry Anti-Theft & Protect (ukuvikelwa kokulwa nobugebengu) kweBlackBerry 10
Ukhohlwe iphasiwedi ye-BlackBerry ID kudivayisi yakho BlackBerry 10? I-— Sizokubuyisela ukufinyelela okugcwele kuyo, noma ngabe amasevisi weBlackBerry Protect (Blackberry Protector) neBlackBerry Anti-Theft (BlackBerry Anti-Theft Protection) ayasebenza.
Le nsizakalo iyatholakala kuwo wonke ama-smartphones ku-OS BlackBerry 10, kufaka phakathi iPassport, Classic, Z30 nabanye.
Price of Ukuvula i-BlackBerry Anti-Theft & Protect (ukuvikelwa kokulwa nobugebengu) kweBlackBerry 10 service for your BlackBerry model
Ngimudinga uhlobo olunjani lokuvula?
Ivula BlackBerry kusuka opharetha ku-0 imizamo yokufaka ikhodi
Ivula i-BlackBerry Messenger (BBM) ne-Wi-Fi ku-BlackBerry PCT
Ibuyisela "i-BlackBerry" efile "efile.";
Ibuyisela i-ID ekhohliwe i-BlackBerry futhi isusa i-BlackBerry Ukuvikela nokuvikelwa kweba BlackBerry 10
Uma i-smartphone yakho ivaliwe BlackBerry Anti-Theft & Protect, sikisela ukuthi ususe iphasiwedi yakho oyikhohliwe i-BlackBerry ID bese uphinde uthole ukufinyelela kudivayisi. Ngemuva kokuvula unga:
Sebenzisa idivayisi nge-BlackBerry ID entsha
Sebenzisa i-smartphone ngaphandle kwemingcele
Yini i-BlackBerry ID, ukuvikelwa kwebadoti BlackBerry Vikela futhi Anti-Theft
I-BlackBerry ID — isihlonzi esiyingqayizivele somnikazi wedivayisi BlackBerry. Ihlanganisa ngaphansi kwe-login eyodwa (ikheli le-imeyili) nephasiwedi yonke amasevisi BlackBerry, kufaka phakathi isitolo sesicelo BlackBerry World, BBM isithunywa, kanye nezinsizakalo zokuvikelwa BlackBerry Vikela.
Nakuba ukungena ngemvume kwe-BlackBerry ID yakho ikheli le-e-mail, ngokujwayelekile amaphasiwedi e-BlackBerry ID kanye nekheli lakho le-e-mail lihlukile.
I-BlackBerry Vikela isevisi ye-—, eyakhiwe ekuqaleni ukuze ivuselele idatha yakho, njengoxhumana nabo kanye nezilungiselelo ze-smartphone, futhi ususe kude imininingwane yakho yomuntu siqu uma kwenzeka i-smartphone ilahlekile. Le nsizakalo ivele kumadivayisi ku-OS BlackBerry 5-7, futhi idluliselwe kumadivayisi we-BlackBerry 10, lapho ithola khona izici ezintsha, kuhlanganise nokuvikelwa kokweba i-BlackBerry Anti-Theft.
Kuleli khasi lokulawula le-BlackBerry Vikela ungabona ukuthi i-anti-theft BlackBerry Anti-Theft ivuliwe.
I-BlackBerry Anti-Theft, noma ukuvikelwa kokulwa nokweba, kuvele ngokukhululwa kwe-OS 10.3.2 futhi inikwe amandla ngokuzenzakalelayo. Yingakho amadivaysi e-OS 10.3.2 nangaphezulu angenakukwazi "ukudilizwa" kuya ku-10.3.1 noma ngezansi.
Ngakolunye uhlangothi, i-Anti-Theft — yinto ewusizo engavumele umuntu onokufinyelela efonini yakho (isibonelo, uma ulahlekelwa yilelo noma eyebiwe) ungafundi nje idatha yakho siqu, kodwa futhi uyisebenzise ngandlela-thile. Kudivayisi evaliwe, awukwazi ukwenza izingcingo kuphela futhi uthumele imilayezo, kodwa ngisho ungene kwimenyu enkulu yefoni. Umhlaseli uzothola lo mlayezo uma uvule i-smartphone yakho:
Umlayezo wokuthi ukuze usebenzise i-smartphone BlackBerry 10 kufanele ufake i-BlackBerry ID, eyasetshenziswa ne-smartphone ngaphambili.
Futhi njengoba engazi i-BlackBerry ID yakho nephasiwedi ehambelanayo, idivayisi ayikwazi ukusetshenziswa ngaso sonke isikhathi. Awuzame ukuvuselela i-OS, noma "usizo oluphansi" lwe-firmware. Futhi uma wehla kuBlackBerry OS ingezansi kwe-10.3.2, i-smartphone ngeke ivule ngisho!
Ngakolunye uhlangothi, uma umgibeli engafuni ukufinyelela ku-smartphone yakho, u— ngokwakho, lokhu kuyinkinga uma ungenayo i-login nephasiwedi yeBlackBerryV ID. Lokhu kuyisimo esivamile, amaphasiwedi e-—, futhi ngisho nokungena, abasebenzisi bamane bakhohlwe, futhi kwezinye izimo abazi (uma banikeze i-smartphone noma bayifake esitolo lapho bethenga).
Uma ngabe awukwazi ukusebenzisa i-smartphone yakho ngenxa yokuvulwa kweBlackBerry Protect, lokhu kuvikelwa kufanele kususwe.
Ungasusa kanjani i-password ekhohliwe ye-BlackBerry ID bese ususa i-BlackBerry Vikela futhi i-Anti-Theft
Uma ukhohliwe iphasiwedi yakho ye-identifier BlackBerry ID, kodwa khumbula ikheli le-imeyli yokungena ngemvume, futhi uthola leli bhokisi lemeyili, ungabuyisela iphasiwedi ekhohliwe. Uma ungakhumbuli ukungena ngemvume kwe-BlackBerry noma ungenayo ibhokisi leposi elixhunyiwe, ungabuyisela kuphela ukufinyelela kudivayisi usebenzisa isevisi yethu.
Sicela uqaphele, iphasiwedi ye-BlackBerry nephasiwedi ye-smartphone — ihlukile. Iphasiwedi ye-smartphone ivimbela ukufinyelela kudivayisi ngemuva kwemizuzu embalwa uma ingasetshenzisiwe, futhi ivimbela ukufinyelela okungagunyaziwe kwedatha yakho. Iphasiwedi yedivayisi, uma uyikhohlwa, ayikwazi ukubuyiselwa, kodwa uma usula idatha kwi-smartphone (lokhu kwenzeka uma ufaka iphasiwedi ngokungalungile izikhathi ezingu-10), i-smartphone ingasetshenziswa futhi (yonke idatha izolahleka, i-BlackBerry izoba entsha uma iqala ukuvula ).
BlackBerry ID, Vikela futhi BlackBerry Anti-Theft — isevisi eyingqayizivele engavulwa ku-InfResolutions-BlackBerry yesevisi yesikhungo. Ukuvula i-BlackBerry ID / Protect itholakala kuma-smartphones e-BlackBerry 10 kubo bonke abasebenzisi be-telecom, futhi kungakhathaliseki ukuthi ivelaphi kudivayisi:
I-BlackBerry P'9982 i-Porsche Design
I-BlackBerry P'9983 Design Porsche
Futhi amanye amadivaysi ku-BlackBerry 10
Ukususa ukuvikelwa (ukuvula) BlackBerry Vikela "okuphakade" . Lokhu kusho ukuthi ngemuva kokuvula i-BlackBerry Anti-Theft nokuvikela, ungangena i-ID yeBlackBerry ID entsha, ukhanyise i-smartphone yakho kunoma iyiphi i-OS version, ufake noma iyiphi isofthiwe.
Isikhathi sokuhola — 1-2 izinsuku.
Isibonelo sokusetshenziswa . Ulethwe nge-BlackBerry Passport smartphone ku-OS 10.3.2 futhi uyisebenzise okwesikhashana. Kodwa-ke, wayengazi ukuthi i-BlackBerry ID isivele isebenze kuso, futhi ngemva kokuvuselela isofthiwe, idivayisi icela ukungena ngemvume nephasiwedi ye-BlackBerry ID ongazi, futhi akunakwenzeka ukuwabona. I-— Isixazululo BlackBerry Vikela isevisi yokuvula!
Isibonelo sokusetshenziswa . Usebenzise i-BlackBerry Z30 smartphone isikhathi eside, futhi ungakhumbuli iphasiwedi yakho ye-BlackBerry ID, futhi awusakwazi ukufinyelela i-imeyili ukuyibuyisela. Ungalahli idivaysi yakho — sizobuyisela ukufinyelela okugcwele kuyo!
Ulwazi oluthe xaxa ngokususa i-BlackBerry Ukuvikela nokuvikela i-BlackBerry ID
Ukuze unikeze isevisi, udinga ukuletha idivayisi esikhungweni sethu senkonzo, ukuvula okukude kweBlackBerry Protect & Anti-Theft akunakwenzeka. Ungathumela futhi le divayisi enkonzweni yeposi , futhi emva kokuvula sizoyithumela kuwe.
Uma ngabe idivayisi inedatha yomuntu siqu, izosuswa. I-BlackBerry ikhathalela ukuphepha kolwazi oluyimfihlo lwabasebenzisi (othintana nabo, izincwadi, amanothi, njll), futhi akunakwenzeka ukuyibuyisela.
Ngemuva kokukhipha ukuvikelwa kokuvikela nokulwa no-Anti-Theft, ungafaka i-ID entsha ye-BlackBerry ku-smartphone yakho futhi usebenzise idivayisi ngaphandle kwemingcele. Noma kunjalo, sincoma ngokuqinile ukuthi ukhumbule lesi sikhathi, futhi ugcine kangcono izimpawu zakho, ukuze isimo esifanayo singenzeki futhi!
BlackBerry Vikela kumadivayisi weBlackBerry OS 5-7
Amadivaysi e-BlackBerry ku-OS 5-7 nawo anesevisi yokuvikela, kodwa ngaphandle kwe-Anti-Theft. Lokhu kusho ukuthi uma ukhohlwa iphasiwedi ye-BlackBerry ku-smartphone nge-OS 5-7, ubungozi kuphela idatha yakho yomuntu siqu egcinwe kuyo. Uma usula idatha noma ukhanyisa i-smartphone, ungangena i-ID entsha ye-BlackBerry ID bese uphinde usebenzise le divayisi.
I-BlackBerry Vikela kumadivaysi ane-5-7 OS ayifaki isevisi ye-Anti-Theft, futhi isebenza kuphela ukuze isipele idatha yomuntu siqu.